Mino Raiola oo kulan la qaadan doono mid ka mid ah madaxda kooxaha weyn ee Yurub, sababa la xiriira Pogba iyo Matthijs de Ligt – Gool FM
(Yurub) 16 Juunyo 2019. Sida ay baahinayaan warbaahinta kala duwan ee gudaha Talyaaniga, waxaa la filayaa in goordhow uu kulan dhex mari doono madaxweyne ku xigeenka kooxda Juventus ee Pavel Nedvěd iyo wakiilka Pogba ee Mino Raiola, si ay u helaan saxiixyada xiddigaha uu wakiilka ka yahay Paul Pogba iyo Matthijs de Ligt suuqan xagaaga.
Wargeysyada “La Gazzetta dello Sport” iyo “Tuttosport” ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka kooxda Juventus ee Pavel Nedvěd ayaa kulan la yeelan doona Mino Raiola maanta oo Axad ah, waxayna ka wada hadli doonaan labo arrimood, tan koowaad ayaa ah isku dayga ay ku doonayaan in markale ay dib kaga soo ceshadaan Paul Pogba kooxda Manchester United.
Inkastoo Real Madrid ay tahay kooxda ugu xoogan ee heshiiska Pogba kula dagaalami karta Juventus, balse dhibaatada ugu weyn ayaa ah in Manchester United ay dooneyso lacag dhan 150 milyan oo euros.
Balse Juventus ayaa isku dayi doonta inay hoos u dhigto qiimaha ay kula soo wareegeyso Pogba, iyadoo heshiiska qeyb kaga dhigi doonto xiddig kale sida Paulo Dybala, Douglas Costa ama João Cancelo.
Sidoo kale Mino Raiola ayaa wakiil u ah daafaca kooxda Ajax e Matthijs de Ligt oo lagu qiimeeyo aduun dhan 70 milyan euro, waxaana si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo kooxaha Paris Saint-Germain ama Barcelona.
Laakiin kooxda Bianconeri ayaa weydiisan doonta wakiil Mino Raiola hadii weli ay fursad u heli karto inay dalab u dirto xiddiga reer Holland.